नाम जुलिया Kovalchuk र Alekseya Chumakova अक्सर रेडियो र टेलिभिजन समयमा सुने गर्न सकिन्छ, र आफ्नो तस्वीर कवर भरिएका छन् चमकदार पत्रिका को। यी मान्छे - घरेलू शो व्यापार तारा, हाल समयमा - एक enviable दुलही र दुलहा। दुवै मानिसहरू एक रहस्यमय, आकर्षक सौन्दर्य र आकर्षण छ। सायद उनीहरूको समानता को, तिनीहरूले विवाह गर्ने निर्णय गरे? विवाह Kovalchuk Chumakov र कुराकानी धेरै कारण। तथापि, जुलिया र Alexei को प्रेम कथा प्रमाणित गर्छ, पनि, त्यहाँ ठाउँ शो व्यापार मा निष्कपट भावना छ।
इतिहास Alexey Chumakov
Alexey Chumakov बाल्यकाल रचनात्मक व्यक्तित्व थियो: उहाँले टक्कर को कक्षा मा एक संगीत स्कूल संलग्न थियो, त्यो स्कूल संगीत सञ्चालन र घटनाहरू आयोजक मा भूमिका खेलेका। जुनियर उच्च मा अध्ययन गर्दा, उहाँलाई अनुसार, त्यो दृश्य बुझे - आफ्नो व्यक्तिको पेशा। आत्म-बना गीतहरूको एघार वर्ष र तिनीहरूलाई कार्य गर्दछ। भविष्यमा कलाकार मास्को सारियो गर्दा Olympus लोकप्रियता र ख्याति कमाउने आरोहण 2003 मा सुरु भयो। त्यसै वर्ष मा, एलेक्स टिभी परियोजना "जनता कलाकार" मा भाग लिए र रेडियो स्टेशन "युरोप प्लस" बाट दर्शक पुरस्कार जित्यो। विभिन्न टेलिभिजन शो र रेडियो कार्यक्रम, कन्सर्ट पर्यटन दुवै रूस र विदेश मा थप सहभागिता बल्ल गायक प्रसिद्ध गरे।
संक्षिप्त जीवनी Yulii Kovalchuk
एक बच्चाको रूपमा, जुलिया Kovalchuk सक्रिय बच्चा थियो। त्यो व्यायाम, नृत्य र नृत्य मा लगे थियो। उच्च स्कूल पछि, त्यो मास्को राज्य विश्वविद्यालय संस्कृति र कला को प्रविष्ट। 2001 मा, जुलिया Kovalchuk समूह "चम्काउने" को एक सदस्य भए। लोकप्रिय परियोजनामा सहभागिता को6वर्ष को लागि त्यो3एल्बम रेकर्ड र समूह को भाग रहेको, 10 भन्दा बढी क्लिप लिए। 2007 मा उहाँले यो दिन भएको छ जो आफ्नो एकल क्यारियर, को सुरूवात घोषणा।
Alexey Chumakov र जुलिया Kovalchuk को प्रेम कथा
जवान मानिसहरू 2009 मा डेटिङ थाले, तर पहिले उनि धेरै6रूपमा वर्षको रूपमा ज्ञात थियो! एलेक्स बस आफ्नो एकल क्यारियर सुरु बेला, र जुलिया Kovalchuk को "शानदार" परियोजना को रूपरेखा विकास। तर त्यसपछि पनि तिनीहरूले प्रत्येक अन्य लागि आपसी सहानुभूति लाग्यो। प्रेम कथा अनिल कन्सर्ट गर्न जुलियस आमन्त्रित भन्ने तथ्यलाई थाले। केटी धेरै गायक काम छ। त्यो reciprocated: उसलाई कन्सर्ट लागि टिकट दिनुभयो। एलेक्स मात्र आएको छैन, तर पनि ल्याए गुलाब को विशाल फूलगुच्छा ताराहरू गर्न।
को कन्सर्ट पछि, जुलिया आफ्ना साथीहरूलाई साथ सहित एलेक्सिस सफल प्रदर्शन मनाउन गए। बीच कलाकार "रसायन" तिनीहरूले यो दिन बताउन सक्दैन भन्ने उठ्दा। यो त, जवानहरूले त्यहाँ सँगै हुनेछ बुझे थियो। जोडीलाई यसको सार्वजनिक सम्बन्ध को रहस्य खोल्न कुनै हतारमा थियो। तथापि, तिनीहरूले अझै स्पष्ट लुकाउन असफल: एक विवाह चाँडै र Chumakov Kovalchuk विषय भयो №1 प्रमुख समाचार पत्र र चमकदार पत्रिका रूस लागि। तैपनि, मान्नेहरूले कुनै हतारमा आफ्नो सम्बन्ध आधिकारिक Alexei एक inveterate स्नातक थियो कानूनी रूप एउटा साँचो स्त्रीको रूपमा, प्रिय पाकेको छ जब, प्रतीक्षा थिए, र जूलिया।
विवाह Kovalchuk र Chumakov
अहिलेसम्म 2013 मा जोडे विवाह गरेका थिए। वैवाहिक संवाददाता तुरुन्तै सिके त जवान मान्छे, एकदम बन्द छन्। किनभने सबै जुलिया र एलेक्स यस अवसरमा एक रसीला पर्वहरू बनाउन छैन निर्णय गरेका छौं। तिनीहरूले मा समारोह को घनिष्ठ विवरण सारा देश कुरा गर्न चाहेनन्। स्पेन - त्यो घटना प्रेममा एक विस्तृत अनुनाद पनि विदेश गए कारण छैन। विवाह Kovalchuk र Chumakov सर्कल मात्र घनिष्ठ मान्छे मा भयो। त्यसैले, जुलिया, Alexei पिता र नवविवाहितहरूका को असल मित्र को आमाबाबुले उपस्थित एक समारोह मा: 12 मान्छे को कुल। तसर्थ, जोडी आफ्नो व्यक्ति गफ र असाधारण ध्यान बच्न व्यवस्थित।
प्रेमीहरूको आफैलाई लागि एक मिनी-पार्टी मंचन र व्यक्तिहरूलाई प्रेम गर्नुभयो। तिनीहरूले, एक विशाल तीन तले हवेली भाडामा साँझ गर्न संगीतकार प्रत्यक्ष संगीत सुनिन्थ्यो राखएको छ, मा रूसी कुरा एक उच्चारण, तर जो, एक अग्रणी इटालियन रूपमा आमन्त्रित गरिएको थियो। जूलिया Kovalchuk भव्य हिउँ-सेतो विवाह पोशाक मा तैयार थियो। यो हरेक केटी आफ्नो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन लगाउन सपना शायद छ। प्रेम मा समारोह मा paparazzi र पत्रकार बच्न व्यवस्थित किनभने विवाह Kovalchuk र Chumakov उज्यालो र सुन्दर वातावरणमा आयोजित।
काम, आराम, र फिलिमहरु मा: एक जोडी विवाह पछि सँगै सबै गर्छ। हालसालै, स्क्रीन जहाँ मुख्य भूमिकाको मा रोमान्टिक कमेडी, बाहिर मा - Alexey Chumakov र जुलिया Kovalchuk। कथा मा, गायक घमन्डी केटी Zhenya पत्रकारिता को क्षेत्र मा काम गर्ने हार्ड छैन खेल्छ। त्यो मुख्य मा सम्पादक बन्न चाहन्छ। तर मालिकहरुलाई एक परिवार मानिस यूजीन बारेमा भने गर्न सकिँदैन चालेको पोस्ट गर्न चाहन्छु। त्यसैले, त्यो पतिले केही हप्ता खोज्न छ। charismatic, सुन्दर, पति द्वारा प्ले - यसो यसलाई Stas मद्दत गर्छ। जूलिया Kovalchuk र Alekseem Chumakovym संग फिलिम सकारात्मक समीक्षा आलोचकहरु र गुणस्तर सिनेमा को प्रशंसक प्राप्त गरेको छ।
एक मूर्ख - एक महिला भने के गर्ने? जवाफ हामी देख रहे
विवाह छल्ले "Bulgari" - शोधन, शैली र स्वाद को एक प्रकटीकरण
अनुष्ठान हटाउने veils - कोमल र हृदयस्पर्शी विवाह परम्परा
एक स्नातक पार्टीको लागि विचार
विवाह लागि हास्यास्पद र आनन्द प्रतियोगिताहरूमा
हकी मा रणनीति सट्टेबाजी। निम्न मा underdog मा सट्टेबाजी, को अवधि को लागि। सट्टेबाजी
सुझाव र चाल - मा एम्स्टर्डम के हेर्न
मस्कोबेरीमा मास्को क्षेत्र: किस्ताहरू र तिनीहरूका विवरणहरू
रेलवे पार। यात्रा रेलवे पार को नियम। उपकरण रेलवे पार
खुशामदभरा - कस्तो यो व्यवहार?
मास्को मा Krymsky पुल